Fox Sports Go 4.8.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.8.0 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
Application မ်ား အားကစားမ်ား Fox Sports Go
Fox Sports Go ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
• College Football and Basketball
• High School Athletics
FOX အားကစား GO တိုက်ရိုက်အားကစားနှင့်သင့် FOX အားကစားဒေသဆိုင်ရာကွန်ယက်ထဲကနေသင်အကြိုက်ဆုံးဇာတိမြို့အဖွဲ့များကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
FOX အားကစား GO နှင့်တကွသင်ဘယ်နေရာကနေမဆိုဒေသခံအားကစားနှင့်မူရင်း programming ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သငျသညျအိမ်မှာသို့မဟုတ်သွားလာရင်းပေါ်မှာဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင့်စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်နဲ့အခြား Android ထုတ်ကုန်ပေါ်မှ FOX အားကစား GO app ကိုသငျသညျအိမျတျော၌ကအကောင်းဆုံးထိုင်ခုံပေးသည်။
သင်သွားလေရာရာ၌ FOX အားကစား GO ယူ. အပါအဝင်တိုက်ရိုက်အားကစားဖြစ်ရပ်များ, ရာပေါင်းများစွာ watch:
• High School တွင်ပြေးခုံပစ်
FOX အားကစား GO ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသင့် TV ပေးသူအထောက်အထားများနှင့်အတူလက်မှတ်ထိုးဖြစ်ပါတယ်။
* မှတ်ချက်: သင် FOX အားကစား GO ၌သူတို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်သင့် TV ရုပ်သံလိုင်းလိုင်း-Up တွင်ဤချန်နယ်လက်ခံရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တချို့ကလိုင်းများတိုင်းတီဗီပေးသူအဘို့အရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
*** ကျနော်တို့မိုဘိုင်းကြော်ငြာကုမ္ပဏီများနှင့်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှု လိုက်. ကြော်ငြာကယ်နှုတ်ကကူညီသောအခြားအလားတူအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ပေမည်။ ထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာလေ့အကျင့်များနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကနှင့်-မှရှောင်ဖယ်, www.aboutads.infl / ရွေးချယ်မှုကြည့်ပါ။ သင်တို့သည်လည်း www.aboutads.info/appchoices မှာ App ကိုရွေးချယ်မှု app ကို download လုပ်ပါလိမ့်မည်။
ဒီအပလီကေးရှင်းကိုသင် Nielsen ရဲ့တီဗီ Ratings အဖွဲ့ကဲ့သို့စျေးကွက်သုတေသနအထောက်အကူပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်သည့် Nielsen ရဲ့စီးပွားဖြစ်တိုင်းတာခြင်း software ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် http://www.nielsen.com/digitalprivacy ဖတ်ရှုပါ။
Fox Sports Go အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Fox Sports Go အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Fox Sports Go အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Fox Sports Go အား အခ်က္ျပပါ
appstv စတိုး 44.17k 84.3M
Fox Sports Go ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Fox Sports Go အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.8.0
ထုတ်လုပ်သူ FOX Sports Interactive
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.foxsports.com/privacy-policy?nav=false
App Name: Fox Sports Go
Release date: 2019-06-18 15:41:08
လက်မှတ် SHA1: 05:8E:ED:4F:40:67:5F:6D:23:38:AB:9F:88:67:C2:C8:D6:10:58:8E
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Alper Turgut
အဖွဲ့အစည်း (O): Anvato Inc
Fox Sports Go APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ